Is-bahaysiga Musharraxiinta KULMIYE Oo Qaaddacay Shirkii Golaha Dhexe Ee Berri Kuna Tilmaamay Mid Laba Nin U Afduuban | FooreNews
Home wararka Is-bahaysiga Musharraxiinta KULMIYE Oo Qaaddacay Shirkii Golaha Dhexe Ee Berri Kuna Tilmaamay Mid Laba Nin U Afduuban
Is-bahaysiga Musharraxiinta KULMIYE Oo Qaaddacay Shirkii Golaha Dhexe Ee Berri Kuna Tilmaamay Mid Laba Nin U Afduuban
“Waxaan Diidnay In Aannu U Xalaalayno Meel Cid Gaar Ah Loogu Cimaamado, Una Daba Fadhiisan Mayno Muuse Biixi”….Maxamed Biixi Yoonis
Hargeysa (Foore)- Isbahaysiga Musharraxiinta saddexda ah ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Biixi Yoonis, Xildhibaan Axmed Cabdi Kijaandhe iyo Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa si rasmi ah shalay shaaca uga qaaday in aanay gabi ahaanba ka qayb galayn shirka Golaha dhexe ee Barri lagu wado in uu Hargeysa ka qabsoomo iyaga oo sheegay in aan waxba laga qaban marka horeba dacwaddii ay ka qabeen madaxtooyadana ku eedeeyey in ay caddaysteen in shirkaasi cid gaar ah loogu cumaamado sida ay sheegeen.
Musharaxiintan oo shalay shir jaraa’id shalay ku qabtay Magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in aanay shirkaasi tagayn una arkaan mid gabi ahaanba sharciyaddii xisbiga KULMIYE lagu laalay. Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Md. Maxamed Biixi Yoonis oo halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi: “Haddii aannu nahay saddexdii Musharrax ee ka tartamayay KULMIYE markii aannu sida wax u dhaceen aragnay waxaanu umadda u sheegaynaa in aannaan tagayn shirkaasi oo aannaan ka qayb galayn tartan. Waxaan u aragnaa in uu yahay shir xaaraan ah oo gurracan oo afduub ku jira sidaa darteed waxaan qaadanay in aannaan ka qayb galin. Waxaannu leenahay shirkaasi xeerkii xisbiga iyo sharciyaddiisii kuma toosma kumana socdo. Golihii fulinta iyo raggii hawshaa lahaa in ay qabtaan lagama tixgelin loomana joojin cid gaar ayaa iska wadata. Waxa la sameeyey guddi aan meelna sharciyadda ka soo galin. Arrinkuna ma aha nambarraa khaldan iyo arrimo farsamo. Arrinka aan uga joognayna waa dimuquraadiyaddii iyo tartankii xalaasha ahaa oo meesha ka baxay oo lagu tuntay”. Maxamed Biixi Yoonis oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Waxaanu u aragnaa shuruucdii aannu caalamka ka iibinaynay iyo nidaamkii dimuquraadiyadda ahaa in la baal maray. Waxaannu aragnaa Madaxtooyadii oo iyadii horsed u ah in burburkaa KULMIYE ku soo socda ay iyadu hormuud u tahay. Waa kulan la doonayo in loogu yeedho dad suuqa jooga oo la yidhaa hebel baa u codeeyey, waxaan leenahay hebelkaasi iman maayo. Haddii maanta waxa ay doonaan sameeyaan waxaan leeyahay shacabka gacanta la maroojin maayo. Waxaannu leennahay shacabka Somaliland shirkaasi shir xalaal ah ma aha waannu qaaddacnay waanan diidnay in aan ka qayb galno. Waxaan diidnay in aannu u xalaalayno meel la doonayo in cid gaar ah loogu cimaamado. Waxaan madaxweynaha leeyahay, Mudane Madaxweyne waxa maanta xil kaa saran yahay in aad umadda isku soo dabbaasho. In aad ilaaliso dimuquraadiyadda oo aad dadka iyo dalkaba badbaadiso kuna badbaadiso raacidda iyo u hogaansanaanta shuruucda dalka. Taageerayaashayada waxaan ugu baaqayaa in ay nabaddooda ilaashadaan. Waxaan umadda u sheegayaa in ay ka feejignaadaan dariiqaa khaldan ee maanta la inagu wado. cid kasta oo kulankaasi loogu cimaamado u aqoonsan mayno qof xalaal xisbinimo ku soo baxay.”.
Dhinaca kale Musharrax Xildhibaan Axmed Cabdi Kijaandhe ayaa isna yidhi: “Maanta oo Axad ah waxaan ka xumahay in aan halkan ka sheego in aannu shirkii u afduubnaa Muuse Biixi iyo Madaxweyne ku xigeenka aannaan ka qayb galayn. Waxaad og tihiin sidii aannu muddaba ugu celcelinaynay ee aanu umadda u sheegaynay in shirkii Golaha dhexe ee KULMIYE afduuban yahay meel walba laga sheegay. Arrinkaa markii Sheekh iyo Shariifba loogu ergo tagay ee madaxtooyada la tagay ee cid walba ka ergaysay ee ay tidhi waar rag badan oo culus baa maqane ha la isu joojiyo ee laga yeeli waayay waxaanu go’aansannay in kulankaasi ay kooxda yari wadato in aannaan tagin oo aannaan ka qayb galin. Waxaan ka xunnahay in tareenkii aannu mudada badan soo saarnayn ee KULMIYE in aannu halkaa kaga degno. Taasi ma aha KULMIYE ayaannu ka tagaynaa laakiin shirkii maadaama lagu tartami waayay oo uu noqday kooto cid gaar ah u xidhan kama qayb galayno mana tagayno”. Mudane Kijaandhe waxa uu intaasi ku daray: “Dhaqanka KULMIYE waxa ka mid ahaan jirtay in la isu joojiyo, waxaa la xasuustaa shirkii lagu dooranayay Madaxweyne Siilaanyo ee Burco in ay Hargeysa nagaga hadheen Muuse Biixi iyo Alla Ha U Naxariistee Xoghayihii hore ee KULMIYE Marxuum Kayse, aniga ayaa u imid. Waxaan ku idhi waar dad muhiim ah ayaad yihiine waynu jabaynaa haddaad ka hadhaane maxaad u tagi waydeen. Waxay yidhaahdeen waanu cabanaynaa waxaan ku idhi waa la idiin joojin ee naga war suga. Shirkii isaga oo furmaya ayaannu tagnay oo u sheegnay in raggaa la sugo waana lanaga aqbalay oo waxa ay noqotay in la sugo. Sidii bay noqotay oo ay uga qayb galeen maalintii dambe oo uu shirkii ku dhacay. Hadaba waxaan idiin sheegayaa in maanta xataa madaxtooyadii laga soo aayo waayay oo ay si rasmi ah ula safteen kooxdaasi oo afduubkeen la isku raacay”.
Dhinaca kale waxa isna halkaasi ka hadlay Musharrax Cabdicasiis Maxamed Samaale, Wasiirkii hore ee Maaliyadda waxaanu yidhi: “Anagu runtii waxaanu maanta go’aansanay,markaanu aragnay inaan la isku joojinayn,Markaanu aragnay inaan talo lakala qaadanayn,Markaanu aragnay inaan la isku baahnayn,Markaanu aragnay in la leeyahay dadka Murashaxiinta ahi codba uma baahnee sidii la doono ayaa hadhaw loo soo saari karayaa la leeyahay,Markaanu aragnay Damacayagii iyo rabitaankayagii lagu horjoogsanayo Jujuub iyo Qasab waxaanu go’aansanay inaanaan ka qayb galin Kulanka ka dhici doona Huteelka Maansoor 10-ka November,waxaanu isku daynay in shirkaasi la qurxiyo oo la isku joojiyo oo wada tashi iyo walaaltinimo wax ku dhacaan,Nasiib daro way suurta gali wayday,aad iyo aad ayaanu uga xunahay”. Ayuu yidhi Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ka hadlayay shirkaasi.
Previous PostSaldhigyada Sirta ah ee Diyaaradaha aan Cidi Wadin ee Maraykanku ku Leeyahay Jabbuuti oo Sii Kordhaya Next PostMadaxweyne Dadkiisa Ugu Dhaartay In Uu Shaarubaha Iska Xiiri Doono Haddii Uu Ku Guul Darraysto Ballan Uu U Qaaday